अँगालो हालेर सुताउने अनौठो जागिर ! घण्टाको ८ हजार शुल्क « Deshko News
अँगालो हालेर सुताउने अनौठो जागिर ! घण्टाको ८ हजार शुल्क
एजेन्सी । कसैले अंकमाल गरेर पनि पैसा कमाउँदो रहेछ । एकजना महिलाले पैसा कमाउनका लागि यो अनौठो कामको अन्वेषण गरेकी छन् ।
पछिल्लो समय एकजना महिला इन्टरनेटमा भाइरल बनिरहेकी छन् । उनले आफ्ना ग्राहकहरुलाई ओछ्यानमा केवल अंकमाल गरेर सँगै सुत्छिन् । निकै प्रेमभावमा अंकमाल गरेर सुताएबापत उनले प्रतिघण्टा ८० डलर अर्थात् झण्डै ८ हजार शुल्क लिन्छिन् ।
मेरी एकजना व्यवसायिक सुसारे हुन् । उनले आफ्नो त्यो अनौठो सर्भिसद्वारा ग्राहकहरुलाई रिल्याक्स महसूस गराउँदछिन् । उनका अनुसार यसो गर्दा मानिसको शरीरमा अक्सिटोसिन हर्मोन उत्सर्जन हुन्छ । यसले मानिसलाई केवल खुसी दिलाउने मात्र होइन, तनाव पनि कम गरिदिन्छ । यस्तो थेरापीको एउटा सेसन १ देखि ४ घण्टा सम्मको हुन्छ ।
मेरी आफैं पनि प्रेममा छिन् । उनको त्यो अपरिचितलाई अँगालो हालेर सुत्ने पेशालाई उनका ब्वायफ्रेण्डले कुनै दखल पुर्‍याएका छैनन् । त्यो कुनै यौनिक कार्य होइन र एउटा थेरापी मात्र हो भन्ने कुरा आफ्नो प्रेमीलाई जानकारी रहेको उनको भनाइ छ । यो पेशाले आफू स्वयंलाई पनि फाइदा भएको उनी बताउँछिन् । अहिले आफूलाई मिठो निद्रा लाग्ने, तनाव कम भएको र जिउमा स्फूर्ति पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
सुत्केरी हुँदा बच्चासँगै बन्दुकको गोली पनि निस्कियो
काठमाडौँ । भारतको बिहारको हाजिपुरमा एउटा अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । यहाँ एक गर्भवती
अचम्मका बालक ! जो दिन मा ४० वटा चुरोट तान्छन
इन्डोनेसियाका ‘आल्दी रिजाल’ नामक एक बालक दुई बर्षको हुँदा उनका तस्बिरहरु समाजिक सञ्जालमा निकै भायरल
काठमाडाैँ । एक जोर जुत्ताको मूल्य बढीमा कति पर्ला ? १० हजार, २० हजार या